Project Cycle Management သင်တန်း
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုစေရန် STI Myanmar University (Mandalay Campus)တွင်သင်ကြားပို့ချမည့် Project Cycle Management သင်တန်း စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်
သင်ကြားမည့်ဆရာ: ဒေါက်တာသန့်ဇင်(Expert/Consultant in Public Health and Development)
MSc. (Public Health, University of London), Dip. (London School of Hygiene & Tropical Medicine),M.B.,B.S (University of Medicine I, Yangon)
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Fellowship (UK) သင်တန်းရက်: ၉.၉.၂၀၁၇ ( စနေနေ့) သင်ကြားချိန်: နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ သင်ကြားမည့်နည်းလမ်း: Presentation, Discussion, Brainstorming & Group works သင်တန်းနေရာ: STI Myanmar University (MDY Campus )
09 78 3800062 ~ 64 သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်သူများ : မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို ဒီသင်တန်းက ဘာတွေသင်ပေးမှာလဲ။
စီမံချက်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို နားလည်သိရှိစေရန် သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။ Project တစ်ခု၏အောင်မြင်ရာအောင်မြင်ကြောင်း အချက်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးရှုထောင့်မှ သုံးသပ်နည်း၊ Project စီမံခန့်ခွဲမှုအား သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းဗျူဟာများ၊ သုံးသပ်ရာတွင် အသုံးပြုသင့်သည့် နည်းလမ်းများ စသည်တို့ကို လေ့လာသင်ယူရပါမည်။ ဘယ်သူတွေ တက်သင့်သလဲ။
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို စီမံချက်ဖြင့် စနစ်တကျ လုပ်ငန်းအောင်မြင်လိုသူများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လိုသူများ၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ RSVP : STIMU ( MDY Campus )